Akụkọ | September 2019
Green screen video - ihe ị ga-eme
Editor Si NhọRọ September 23,2019
Bethesda na-agba mbọ ịkwụ ụgwọ maka mmebi nke ndị egwuregwu ụgha a Fallout 76
A bit nke na-egwuregwu ego maka knapsack. Ndị na-egwu egwuregwu enwebeghịrị obi ụtọ na Fallout 76, ugbu a, nsogbu ndị ọkachamara na-eche ihu agafeghị ókè egwuregwu ahụ. Maka $ 200 na Bethesda, ị nwere ike ịzụta mbipụta Ike Armor, nke, karịsịa, nwere akpa ákwà ngwongwo.
Ụzọ iji wepu ego site na akpa ego WebMoney
Ọtụtụ ndị na-eji usoro nkwụ ụgwọ eletrik ugbu a. Ọ dị mma: ego ego nwere ike ịdọrọ ego maọbụ kwụọ ụgwọ maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla n'Ịntanet. Otu n'ime usoro ịkwụ ụgwọ kachasị ewu ewu bụ WebMoney (WebMoney). Ọ na-enye gị ohere imepe akpa wdg na nke ọ bụla ego ọ bụla, na-enyekwa ọtụtụ ụzọ isi nweta ego kọmputa.
Onye na-adọkpụ ụgbọala nke mkpụrụ obi ọhụrụ Soulcalibur VI ka kụrụ Web
Namco Bandai n'amaghi ama kpughere onye ozo di egwu nke agha ya na-abia ... obughi maka oge mbu! Ihe ndekọ Twitter nke òtù America nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Namco Bandai kwetara n'ụzọ na-ezighị ezi na njikọ nke ụgbọala na-adọkpụ, nke na-egosiputa ọdịdị mbụ nke egwuregwu egwuregwu Soulcalibur VI - Spanish pirate Cervantes de Leon.
Ọhụụ ọhụrụ nke Intel n'etiti ndị nhazi processors ga-abụ Core i9-9900K
A ga - akpọ Cors i9-9900K nke mbụ asatọ nke isi Intel processor maka ikpo okwu LGA1151, ya na ọtụtụ ụdị nke usoro itoolu ga - aga ire ere. Nke a na-akọ WCCFtech. Dị ka akwụkwọ ahụ si kwuo, maka ọrụ nke ọhụrụ ibe ga-achọ motherboard na ọhụrụ set nke usoro echiche Z390.
IGame gbara agba GeForce RTX 2080 Ti Kudan kaadị vidio $ 3,000
Ụlọ ọrụ ndị China na-eji agbaji ahịa nke iGame GeForce RTX 2080 Ti Kudan kaadị vidio ruru $ 3,000. Ị nwere ike ịzụta ngwaahịa ọhụrụ wepụtara na mbipụta dị nkè nke 1000 mkpụrụ akwụkwọ na jd.com trading platform. IGame gbara agba GeForce RTX 2080 Ti Kudan agba agba IGame GeForce RTX 2080 Ti Kudan kwadoro na usoro ngwanrọ nke ngwakọta nke jikọtara onye nlekota ikuku na ihe ngbochi mmiri.
Ulo oru ahia kacha mma - 2018
Mgbasa ozi aghọwo akụkụ dị mkpa nke ndụ ọha mmadụ, na iji dọta uche nke ndị na-ekiri ya, ndị na-emepụta azụmahịa dị njikere ịga maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile. Kedu ụdị azụmahịa ndị kachasị mma ma kachasị anya na 2018? Ọdịnaya 1. Alexa na - ewepu olu ya - Super Bowl LIEL na - ere ahịa 2.
Ndị Nledo WhatsApp na-egwu egwu na ozi olu
National Cyber ​​Security Agency nke Israel bipụtara otu ọgụ na ndị ọrụ ozi WhatsApp. Site n'enyemaka nke ezughị okè na usoro nchedo ozi olu, ndị na-awakpo na-ejichi njikwa zuru oke na akaụntụ na ọrụ. Dika edeputara na ozi a, ndi ozo bu ndi na - agba oso oku bu ndi na - aru ​​oru na ndi na - aru ​​oru nke ozi olu, mana ha edobeghi ohuru ozo.
Iri mmadu n'ime ahia ndi mmadu kachasi ike ma nwee obi ike
Ọrụ na cryptocurrencies adịbeghị anya na-aghọ ezigbo ụdị ego. Ha kacha ewu ewu na mba ndị mepere emepe. Ndị Russia abanyela n'ụwa nke mkpuchi anya dịka na-adịbeghị anya na ọtụtụ arụmọrụ na "banknotes ọma" ka na-akpata nsogbu. Otu n'ime oge kacha sie ike bụ ịnyefe ego dijitalụ na dollar "nkịtị" ma ọ bụ rubles.
Yandeks.Toloka: otu esi enweta na ego ole ị nwere ike inweta ego
Yandex.Toloka bụ otu n'ime ụzọ isi eme ego na Intanet. Nyocha banyere ọrụ a na-emegide onwe ya: mmadụ na-eme mkpesa na ọ na-arụ ọrụ ụbọchị dum na ọrụ ma ọ bụghịdị na-enweta narị rubles, onye na-eme ka Toloka bụrụ isi iyi ego. Ego ole ka ị ga - enweta ekele maka ọrụ Yandex a?
N'ihi ebubo nke ịkpa ókè agbụrụ, Valve gbanwere aha otu n'ime kaadị na Artifact
Valve na-aga n'ihu ịkekọrịta ozi gbasara egwuregwu kaadị Artifact na-abịanụ, otu n'ime kaadị ndị e depụtara adịghị amasị ndị egwuregwu ahụ. Aha na omume nke Crack the Card Card, nke Valve gosiri n'izu gara aga, kpatara mmeghachi omume na-ezighị ezi site na obodo ịgba egwu.
Laptọọpụ arụ ọrụ na "Elbrus" Rostec emeziri atụmatụ na puku 500 rubles
Akwụkwọ edetu echedoro nke Rostec mepụtara site na ụlọ Elbrus 1C + na-arụ ọrụ ga-efu onye ahịa, Ministry of Defense of the Russian Federation, ọtụtụ ugboro karịa ọnụ karịa ndị ya na mba ọzọ. Dị ka ụlọ ọrụ mgbasaozi nke ụlọ ọrụ obodo si kwuo, ọnụahịa nke ngwaọrụ na nhazi nhazi ga-abụ puku 500 rubles. Laptọọpụ EC1866 nwere nnukwu akara ọrụ nke nwere ike ijide ọtụtụ okpomọkụ na mmetụta ndị ọzọ, gụnyere ịkụ, mkpọtụ na mmiri na-eme ka mmiri ghara ịdị.
New Diablo agaghị abụ otu ọkpụkpọ?
Otu n'ime ndị ọrụ Reddit ezitere ozi banyere akụkụ ọhụrụ nke Diablo, nke a kwupụtabeghị ọkwa ọkwa. Dị ka onye edemede ahụ si kwuo, ya na "enyi ya na Blizzard" maara ụfọdụ nkọwa gbasara egwuregwu ahụ. Ya mere, Diablo 4 ga-abụ egwuregwu zuru ezu, ọ bụ ezie na ọ ga-echekwa ọdịdị isometric na atụmatụ ndị dị na egwuregwu.
New ekwe ntị ekwe ntị na New Bose iji nyere aka imeri ehighi ura
Ụlọ ọrụ America Bose kwusara mmalite nke ahịa nke ekweisi ekwe ntị Noise-masking Sleepbuds, mere iji luso ehighi ụra. Ngwaọrụ ahụ, nke na-efu $ 250, nwere ike igbochi ụda olu na-egbochi ụra ma mụta ụda ntụrụndụ na abụ olu ụtọ. Ego ndị dị mkpa iji malite mmepụta nke Bose Noise-masking Sleepbuds, ụlọ ọrụ ahụ na-agbakọta n'elu igwefụfụ n'elu igwefụfu Indiegogo.
Ndị Guild Agha Belge 2 egwuregwu enweghị ike ịzụta ego ego
Na MMORPG a, a chọpụtara ihe ịgba chaa chaa. N'oge na-adịbeghị anya, ndị ọrụ nke Guild Agha 2 si Belgium malitere ịtamu ntamu banyere enweghị ike ịzụta ego maka ego maka ezigbo ego. Belgium kwụsịrị na ndepụta nke mba nwere ike ịhọrọ mgbe ị na-azụta n'ime egwuregwu. Ma onye na-emepụta ArenaNet, ma ọ bụ onye nkwusa nke NCSoft ka enyeghị nkọwa ọ bụla banyere ọnọdụ a, ma nke a yiri ka ọ bụghị banyere mmejọ ọ bụla, mana maka ịmegharị egwuregwu ahụ iji rube isi iwu ndị Belgium.
Njehie nke ndị na-emepe emepe na-eduga n'inwe mmeri nke egwuregwu ha.
Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-egwu egwuregwu na-ahụ maka mgbasa ozi na Evolvation site na otu ndị a na-akpọ HyperReuts abuana site na mmadụ ole na ole ruo ọtụtụ narị puku n'ime ụbọchị ole na ole. E wepụtara evolite na Steam na February 2017, ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-egwu ya: ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ n'otu oge ahụ bụ karịa nke ọtụtụ mmadụ.
Ihe omuma kachasị mma nke kọmputa na-egosi na IFA na Germany
Kwa ụbọchị a na-achọpụta ọtụtụ nchọpụta nkà na ụzụ na-akpali akpali n'ụwa, usoro ihe omume kọmputa na ngwaọrụ dị. Ọtụtụ mgbe, ụlọ ọrụ buru ibu na-agbalị ịnọgide na-arụ ọrụ ha na ntụkwasị obi siri ike. Ihe ngosi IFA na Germany na-emepe ihe nzuzo nke nzuzo, nke - na omenala n'oge mmalite nke mgbụsị akwụkwọ - ndị na-emepụta ihe ngosi gosipụtara ihe ha kere, nke na-aga ire ere.
Group Mail.Ru nwere ozi emelitere
Group Mail.Ru emeela ihe kachasị emelite nke e-mail ya n'ime afọ ole na ole gara aga. Ọ bụghị naanị na ebumnuche ahụ, mana ọrụ nke ọrụ ahụ abanyewokwa nhazi dị ịrịba ama. N'etiti atụmatụ ọhụrụ nke ga-adịru ngwa ngwa maka ndị ọrụ Mail.Ru, ndị nnọchite ọrụ ụlọ ọrụ na-ezo aka na ịkwụ ụgwọ nke ọrụ, "nchịkọta" nke akwụkwọ ozi yana azịza dị nro.
Ihe nchekwa data nke Access Access nwere afọ atọ
Mmalite Access Premier ọrụ nwere ike nwalee egwuregwu ọhụrụ. Ndepụta nke ọrụ ndị dị na ndị debanyere aha na-agụnye Leeer 2, Darksiders III na nke a bụ egwuregwu ndị uweojii 2. Na mbụ, a kọrọ na ọ bụ naanị akụkụ ọhụrụ nke nchịkwa Darksiders ka a ga-agbakwunye na ụlọ akwụkwọ ọrụ egwuregwu. Na mberede, maka ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ọrụ ahụ gụnyere nnwere onwe abụọ dị na nso nso a: njide na njiri nke njikwa nke ndị uweojii ndị uweojii Nke a bụ ndị uweojii 2 na simulator maka onye na-ahụ maka ihe ọmụma Viewer 2.
Ọ bụghị ndị nne na nna nwere ogwe AM4 ga-akwado nkwado AMD Ryzen 3000
N'agbanyeghi nkwa nkwa AMD iji chekwaa mmekorita nke ndi oru Ryzen na ulo Zen 2 na nne AM4 nile, n'eziokwu, ọnọdụ na nkwado maka ibe ọhụrụ nwere ike ghara ibu oke nkpa. Ya mere, n'ihe gbasara nne na nna ochie, nkwalite nke CPU ga-ekwe omume n'ihi oke ikike nke ibe ROM, ọ na-ewere PCGamesHardware akụ.
WebAssembly na-enye ndị na-agba ọsọ ikike mbanye anataghị ikike ọ bụla na kọmputa na profaịlụ Intel
Nwelite ọzọ nke teknụzụ WebAssembly, nke na-enye ohere ka ndị nchọgharị rụọ ọrụ na-ederede dị ala, ga-eme ka kọmputa dabere na ikikere nke Intel na-enweghị ike ịwakpo mwakpo Specter na Meltdown, n'agbanyeghị nkwụsị a tọhapụrụ. Nke a kwuru site n'aka Forcepoint cyber safety specialist John Bergbom. Iji Specter ma ọ bụ Meltdown iji kpoo kọmputa site na ihe nchọgharị, ndị na-awakpo chọrọ iji oge ngwa ngwa.
Master Business Card 10.0
Wind wind windo
Izizi nke njehie "Achọghị arịrịọ ahụ n'ihi njehie I / O na ngwaọrụ" mgbe ejikọtara USB flash drive
Ntuziaka maka ịmepụta flash drive na Ubuntu
Gbanyụọ ma gbanye GAR faịlụ
Ọ dị mkpa ịbịakwute nhọrọ nke isi ihe nhazi maka kọmputa na ọrụ kachasị mkpa, ebe ọ bụ Ogo nke CPU ahọrọ na-emetụta arụmọrụ nke ọtụtụ kọmputa ndị ọzọ. Ọ dị mkpa ịkọwa ike nke PC gị na data nke usoro nhazi ahụ chọrọ. Ọ bụrụ na ị kpebie ikpokọta kọmputa n'onwe gị, buru ụzọ kpebie na processor na motherboard. GụKwuo
SSD ma ọ bụ HDD - ihe ịhọrọ?
Ịnyefe ihe oyiyi site na igwefoto gaa na kọmputa